VACC400 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၄၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 400
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC400
VACC400 Purified water filtration system isanew product manufactured according to American’s technology with lots of outstanding advantages. The product is increasingly trusted by the customers.
VACC400 ရေသန့်စစ်ထုတ်ပေးသောစနစ်သည် ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးနဲ့အတူ အမေရိကန်ရဲ့ နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားသော ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းက ၀ယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားပါတယ်။
Members of Viet An Company Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဝင်များ
Every year, Viet An company distributes hundreds of industrial VACC400 water filtration system nationwide and to the ASEAN countries.
Viet An ကုမ္ပဏီမှ VACC400 ရေစစ်ထုတ်ပေးသော စနစ်ကို နိုင်ငံတွင်းမှာရော အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ပါ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖြန့်ချီပေးလျက်ရှိပါသည်။
With VACC400 line, you can turn dirty water into pure water, satisfying high safety and hygiene standards to serve diverse using demands. Withaclosed manufacturing process along with bottled water filtration line high-quality material imported from America, England, Japan, Korea, etc., the machinery has long durability and stable performance.
VACC400 ကို သုံးခြင်းဖြင့် ညစ်ပတ်နေသောရေများကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပြီး အစားအသောက်သန့်ရှင်းခြင်း စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေပါတယ်။ ရေစစ်ထုတ်သောလိုင်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ အင်္ဂလန်၊ ကိုရီးယား စသည့် နိုင်ငံများမှ တင်ပို့သည့်အတွက် ကြာရှည်အသုံးခံပြီး လုပ်ဆောင်မှု တည်ငြိမ်ပါတယ်။
Currently, we are offering the cheapest price compared to other products of the same category in the market.
ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ အခြားစက်တွေနဲ့ ယှဉ်လျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်က ဈေးနှုန်းချိုသာပါတယ်။
Learn more about our RO water filtration systems of different capacity at https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc.
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေမတူညီတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေစစ်ထုတ်ပေးသောစနစ်တွေအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိဖို့ https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc. တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
3 most outstanding advantages of VACC400 Purified water filtration system
VACC 400 ရေသန့်စစ်ထုတ်ပေးသောစနစ်၏ ထူးခြားသော ကောင်းကျိုး ၃ ခု
Currently, on the market, there arealot of units distributing water purification lines with various prices. However, we are confident to state that we are offering the best price for the pure water filtration system with the capacity of 400L/h. Our offering price is lower than the market price.
ယနေ့ခေတ်ဈေးကွက်မှာ ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရေသန့်စင်ပေးသောလိုင်းများကို ရောင်းချနေကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့က တစ်နာရီမှာ ၄၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ရေစစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ အခြားစက်တွေထက်တော့ ဈေးနှုန်းချိုသာပါတယ်။
We can do this through directly importing and distributing the machinery in Vietnam.
ကျွန်တော်တို့က ဒီစက်ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးနေပါတယ်။
The product is compactly designed to save installation while still ensuring high capacity. Stain-free even under long-term use.
တပ်ဆင်တဲ့ ဧရိယာကို ချွေတာဖို့ သိပ်သည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းကို သုံးထားပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလည်း မြင့်ပါတယ်။ စတိန်းမပါပေမယ့် ကြာရှည် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Composite tanks are made from recommended material in water treatment and filtration industry. Work well in both salt and brackish water.
ပေါင်းစပ်တိုင်ကီတွေကို ရေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစစ်ထုတ်ပေးခြင်း စက်ရုံက်နေ အကြံပြုထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ရေချိုရေငန်နှစ်မျိုးလုံးမှာ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
We belive that you will feel the same as you use this product,
သင်ဒီစက်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ အခုလိုပဲခံစားရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
3. Stable performance, long shelf life
Thanks to its closed manufacturing process and high-quality equipment, the system offers stable and smooth operation.
အရည်အသွေးမြင့် စက်တွေတပ်ဆင်ထားမှုနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ဒီစနစ်က တည်ငြိမ်ပြီး ချော့မွေ့တဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
စနစ်ကို လည်ပတ်ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။
The mechanical valve system3is produced according to American technology to bringalong durability and easy operation. The valve system is mounted on the filter the filter cartridge housing, you just need to adjust the vales in3directions with your hands. The water then will be pumped up to wash and remove all sedimentation in the filter cartridge.
စက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အဆို့စနစ် ၃ ကို ကြာရှည်ခံပြီး လုပ်ဆောင်မှု လွယ်ကူစေဖို့ အမေရိကန်နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစနစ်ကို စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်မှာ တပ်ဆင်ပါတယ်။ ဦးတည်ရာဘက် ၃ ခုကို လှည့်ပတ်နိုင်သောကြောင့် ၃ ဂိတ်အဆို့လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်အိမ်ကို ဆေးကြောဖို့ အဆို့တွေကို ဦးတည်ရာဘက် ၃ ခုဆီ လက်နဲ့ ညှိပေးရပါမယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် ရေကို စုပ်တင်ပြီး အညစ်အကြေးတွေ အားလုံးကို သန့်ရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။
The washing process might takes several minutes to complete.
ဆေးကြောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်က ပြီးဆုံးဖို့ မိနစ်များစွာ ကြာပါတယ်။
The average shelf life of the system is from 10-15 years.
စနစ်ရဲ့ ထားသိုနိုင်တဲ့ ပျမ်းမျှ သက်တမ်းက ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ထိ ဖြစ်ပါတယ်။
Structure of VACC400 Purified water filtration system
VACC400 ရေသန့်စစ်ထုတ်စနစ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပုံ
With the application of RO nanoe water filtration technology - the most advanced technology currently, this sytem suits diverse demands the households, manufacturers and traders.
ယခုအခါ ခေတ်အမီဆုံးဖြစ်တဲ့ RO nanoe ရေစစ်ထုတ်ခြင်း နည်းပညာ အပလီကေးရှင်းနဲ့ ဒီစနစ်က အိမ်သုံး စက်ရုံးသုံးတွေနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်သူတွေအတွက်လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
အဆိပ်ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ ရောဂါပိုးကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အနံ့အသက်ဖျောက်ပေးခြင်း စစ်ထုတ်စနစ်
စီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းစက်၊ ရေဖိအားတိုင်းတာခြင်းစက်နဲ့ အော်တို လျှပ်စစ်အားစနစ်
+ Bactericidal system and bacteria filter
ဘက်တီးရီယားစနစ်နဲ့ ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာ
+ Frame and other accessories
All these components are genuine products with clear origin. They are clearly stated in the technical specification.
ဒီစက်တွေအားလုံးက စစ်မှန်ပါတယ်။ သူတို့တွေကို နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
With its compact and sophisticated design and high-quality, safe materials, it is extremely easy and convenient to transport and install the system.
သိပ်သည်းပြီး လှပသော ဒီဇိုင်း၊ အဆင့်မြင့်တဲ့ အရည်အသွေး၊ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင် တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူပါတယ်။
With the motto of putting customer interests first, Viet An always creates the best after-sales policy for our customers. We offerawarranty period of 12 months and lifetime maintenance. Our maintenance procedure is really simple. Just call us at 19006013 and our technical teams will be on-site soonest to support you.
ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဦးစားပေးတာကြောင့် Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေကို အကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးနောက် မူဝါဒတွေကို အမြဲတမ်းဖန်တီးပေးပါတယ်။အာမခံသက်တမ်းက ၁၂ လ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့နည်းလမ်းက ရိုးရှင်းပါတယ်။ ၁၉၀၀၆၀၁၃ ကိုသာ ခေါ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသင်းများက သင့်ကို မကြာခင်မှာ ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
During operation period, if you want to change the filtration membrane, pump system or any other genuine filtration equipment of us, read here https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/day-chuyen-loc-nuoc
လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာ အလွှာပါး၊ရေစုပ်စက်စနစ်နဲ့ အခြားစက်ပစ္စည်းတွေကို လဲလှယ်ချင်တယ်ဆိုရင် https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/day-chuyen-loc-nuoc/ မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။
သင့်မှာ ဒီမေးခွန်း ရှိဖူးလား ?
Is it easy or difficult to filter the water?
ရေကို စစ်ထုတ်ရတာ လွယ်လား ခက်လား?
RO ရေစစ်ထုတ်ခြင်း နည်းပညာဆိုတာ ဘာလဲ?
How to check the quality of the water in use?
အသုံးပြုနေတဲ့ရေရဲ့ အရည်အသွေးကို ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်မလဲ?
What should I do if I want to openabottled purified water manufacturer?
Is industrial water filtration expensive?
Above inquires will be answered in other articles of us.
အပေါ်က စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာ ဖြေပေးသွားပါမယ်။
Once you have decided to choose this VACC400 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
15 20 Filter housing ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 pc
24 Electrical system လျှပ်စစ်အားစနစ် 1 pc LK Korea
Hỏi đáp & đánh giá VACC 400 400LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်